Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka iyo Wasaaradda Maaliyadda oo ka wadda-hadlay miisaaniyadda 2021 – Kalfadhi
December 16, 2020 Hassan Istiila
Guddiga Maaliyadda, Miisaaniyadda, Qorshaynta iyo la- xisaabtanka Hay’adaha Dowladda ee Golaha Shacabka iyo Wasaaradda Maaliyadda ayaa maanta kulan ku yeesheyn xarunta Guddiga maaliyadda ee Villa-Hargeisa.
Kulanka waxaa shir-guddoominaayay ku-simaha guddoomiyaha ahna guddoomiye ku-xigeenka guddiga Xildhibaan Aamina Sheekh Cusmaan, waxaana kulanka intiisa badan looga hadlay miisaaniyadda 2021 oo hadda hortaalla Golaha Shacabka.
Dhanka wasaaradda maaliyadda kulanka waxaa ugu qeyb-galay Wasiiru dowlaha wasaaradda Maaliyadda Mudane Xildhibaan Maxamuud Xayir Ibraahim, Wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda mudane Prof. C/llaahi Sheekh Cali Qaloocoow iyo howl wadeenada wasaaradda maaliyadda.
Golaha Shacabka ayaa maalmaha soo socda ansixin doona miisaaniyadda, taas oo uu Wasiirka maaliyada uu sheegay in ay muhiim u tahay dalka.
Golaha Midowga Musharraxiinta oo cambaareeyay ciidamo la dul dhigay xarumaha qaar kamid ah hoggaamiyayaasha Midowga Musharraxiinta